ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना,नियम मिच्नेलाई सीसीटीभीको सहयोगबाट कारवाही | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १६ माघ २०७६, बिहीबार २१:३३ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा अहिले प्रशस्तै देख्न सकिन्छ ‘ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना गरिनेछ’ । सडकका बीच बीचमा यस्ता सूचना प्रहरी टाँसेको छ ।
कतिपय चालकलाई समेत कस्तो अवस्थामा १० देखि १५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने हो भन्ने जानकारी नभएको पाइयो । ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लंघनका घटना दैनिक बढेको भन्दै कारवाहीलाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ ।
कारवाहीसँगै समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रममार्फत सचेतना पनि बढाउँदै लगिएको महाशाखाका एसएसपी भीमप्रसाद ढकालले बताए । केही दिनअघि मात्रै जथाभावी सडक काट्ने पैदलयात्रुलाई समेत लक्षित गरेर महाशाखाले २० मिनेट सडक छेउमै राखेर ट्राफिक कक्षा दिने कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
ट्राफिक प्रहरीको आँखा छलेर लेन अनुशासनलगायत अन्य नियम मिच्नेलाई सीसीटीभीलगायतको सहयोगबाटसमेत कारवाही गरिएको एसएसपी ढकाल बताउँछन् ।
एसएसपी ढकालले ५ हजारसम्म जरिवानाको अधिकार प्रहरीलाई भएको र त्योभन्दा माथि कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आए यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिस गर्ने गरेको बताए ।
कस्ता कसुरमा पाँचदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ?
१. सवारीको स्वरुप परिवर्तन अथवा मोडिफाइ गरेमा
२. वास्तविक नम्बर प्लेट नराखी आफूखुशी नम्बर राखी चलाएमा वा चलाउन लगाएमा
३. प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन गर्न अनुमति नलिइ सञ्चालन गरेमा
“यी कामहरु गरिएको पाइएमा कारवाहीका लागि हामीले यातायात व्यवस्था विभागमा सिफारिस गर्ने गरेका छौं,” ढकालले भने ।
निर्धारति भाडाभन्दा बढी लिएको पाइएमा त्यस्ता सवारी चालकलाई एकदेखि पाँचहजारसम्म ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गराउन सक्नेछ । त्यस्तै दर्ता नगरी सवारी चलाएमा, विदेशमा दर्ता भएको सवारी अनुमति नलिइ चलाएको पाइएमा, बाटो इजाजतपत्र नलिइ सार्वजनिक सवारीले यातायात सञ्चालन गरेमा एकहजारदेखि १५ सयसम्म जरिवाना गराइने ट्राफिक प्रमुख ढकालले जनाए ।
कस्तो कसुरमा एकहजार जरिवाना ?
“सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाएमा एकहजारसम्म जरिवाना हुनेछ,” ढकालले भने, “सार्वजनिक स्थानमा बाधा पुग्ने गरी मालसामन वा सवारी राखेको–चलाएमा, दुर्घटनामा परेको सवारी तथा यात्रीको हानी नोक्सानी पु¥याएको–सम्पर्कमा नआएको, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको, सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिएमा, सवारी बस्ने वा राख्ने मानिस वा मालसमानको हद निर्धारण गरिएकोमा सो हदभन्दा बढी राखी सवारी चलाएको पाइएमा एकहजार जरिवाना गरिनेछ ।”
यस्तो कसुरमा पाँचसयदेखि एकहजार पाँचसयसम्म जरिवाना
–ट्राफिक संकेत वा इशारा उल्लंघन गरी सवारी चलाएको ।
–सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँमा वा समयमा सवारी अड्याएमा ।
–सवारी मोड्न वा ध्वनी संकेत दिन निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडेको वा ध्वनी संकेत दिएको ।
–सडकमा गलत साइडतर्फबाट सवारी चलाएको ।
–एकतर्फी सडकमा सो विपरीत सवारी चलाएको ।
–अवस्था ठिक नभएको सवारी चलाएको ।
–राति बत्ति नबालि सवारी चलाएको ।
–सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँमा वा समयमा सवारी चलाएको ।
–नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएको ।
–पेटी नबाँधि वा हेल्मेट नलाई सवारी चलाएको ।
–सार्वजनिक सवारीको चालकले यात्री लिन इन्कार गरेको ।
–लापरबाही साथ सवारी चलाएको ।
–सवारीको वजन हद निर्धारण क्षेत्रमा बढी वजनको सवारी चलाएको ।
यस्तो गल्ती गरेमा दुईसयदेखि एकहजारसम्म जरिवाना हुन सक्छ
–यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा तोकिए बमोजिम सिट सुरक्षित नराखेमा ।
–सार्वजनिक सवारीमा धुम्रपान गरेमा ।
–खतरापूर्ण मालसामनहरु ढुवानी गर्ने मालबाहक सार्वजनिक सावरीले सांकेतिक चिन्ह देखिने गरी नराखी सवारी चलाएमा ।
–मानिसहरु पेटि भएको सडकमा पेटिबाट नहिँडी सडकबाट हिँडेमा ।
–यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा सो सवारीको दर्ता प्रमाणपत्रमा लेखिएको सिट संख्याभन्दा बढी यात्रु राखी सवारी चलाएमा ।
–लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तिमा दुईजना चालक राखी पालैपालोसँग सवारी नचलाएमा ।
–गति निर्धारण गरिएको स्थानमा सो निर्धारित गतिभन्दा बढी वेगले सवारी चलाएमा ।
–तोकिएको ढाँचा अनुसारको टिकट जारी नगरेमा ।
–सवारीको अन्य भागमा मानिस राखेको ।
–अरु सवारीलाई खतरा हुने किसिमले सवारी राखेको ।
–प्रायोजन विपरीत सवारी चलाएको ।
–पटके बाटो इजाजतपत्र नलिई सवारी चलाएमा
काठमाडौंमा धुलोभन्दा धुवाँको समस्या गम्भीर
काठमाडौं । काठमाडौँका सडकमा कुद्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी सवारी साधन वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । सुन्दा…
कामदार पहिरोमा पुरिएको भिडियो भाईरल
काठमाडौं । सामानिक सञ्जाल फेसबुमा अहिले एउटा भिडियो छाएको छ । एकजना मजदुर पहिरोमा पुरीएको र उद्दार गरेको भिडियो…
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएको प्रहरी अब प्रहरी प्रधान कार्यालय (हेडक्वार्टर)को मातहतमा रहने भएको छ । महानगरीय…
काठमाडौं । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर क्षेत्रका १० हजार बिघा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। अतिक्रमित ९६ बिघा १८…